Yilwa nokutubeka ngokuthatha isikhathi sokuhlela iholide lakho
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » USA » Yilwa nokutubeka ngokuthatha isikhathi sokuhlela iholide lakho
Izinkulungwane zezinhlangano zezokuvakasha ezizungeze i-United States ziqokomisa Uhlelo Lukazwelonke Lonyaka Losuku Lweholide (NPVD) ngoJanuwari 25 ukukhuthaza abantu baseMelika ukuthi bahlele sonke isikhathi sabo sokuphumula sonyaka ekuqaleni konyaka.
Ngemuva kweminyaka ecishe ibe mibili yokucindezelwa okuhlobene nobhubhane, abasebenzi baseMelika bayashiswa—futhi imininingwane emisha iyakufakazela lokho.
Ukusiza ukulwa nokutubeka nokukhuthaza abantu baseMelika ukuthi bathathe iholide elidingeka kakhulu, izinkulungwane zezinhlangano zokuhamba emhlabeni wonke I-united states ziqokomisa unyaka Uhlelo Lukazwelonke Losuku Lweholide (NPVD) ngoJanuwari 25 ukukhuthaza abantu baseMelika ukuthi bahlele sonke isikhathi sabo sokuphumula sonyaka ekuqaleni konyaka.
Ngaphezu kwezingxenye ezimbili kwezintathu (68%) zabasebenzi baseMelika bazizwa okungenani beshiswe ngokulingene futhi abangu-13% bashile ngokwedlulele. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwesigamu (53%) sabasebenzi basezindaweni ezikude basebenza amahora amaningi manje kunalawo abebesehhovisi kanti ama-61% akuthola kunzima kakhulu ukukhulula ama-plug emsebenzini athathe iholidi.
Ngaphandle kwegagasi lakamuva lalolu bhubhane, imininingwane evela Abahlaziyi Bendawo ithole ukuthi iningi labantu baseMelika okwavotwa ngabo basesimweni sengqondo “esilungele ukuhamba” futhi bamagange ukuhlela uhambo:
U-81% wabantu baseMelika ujabulile ukuhlela iholidi ezinyangeni eziyisithupha ezizayo
Cishe abayisithupha kwabayi-10 (59%) bayavuma ukuthi ukuhamba kubaluleke kakhulu kunangaphambili futhi ama-61% ahlela ukwenza uhambo lube yinto ehamba phambili ngesabelomali ngo-2022.
Ngokomlando, I-NPVD bekuhloswe ukusiza ukubhekana nenkinga yabantu baseMelika abahluleka ukusebenzisa sonke isikhathi sabo sokuphumula unyaka nonyaka, nokho-ke, izinselelo zobhubhane zinikeze I-NPVD ukubaluleka okusha: isikhathi sokuhlelela kusengaphambili izinsuku ezikhanyayo kanye nokukhipha izingcindezi zokuphila kwansuku zonke.
Ngemuva kweminyaka ecishe ibe mibili yokuphila nalolu bhubhane, abantu baseMelika banesidingo esikhulu sokusetha kabusha okunikezwa yiholide, kungakhathaliseki ukuthi kuseduze kangakanani noma kude kangakanani. Uhlelo Lukazwelonke Losuku Lweholide yithuba elihle lokuhlala phansi nomndeni nabangane futhi nenze izinhlelo zekhefu elidingeka kakhulu unyaka wonke.
Ngisho nesenzo esilula sokuhlela iholidi singasiza ukuxosha ama-blues asebusika. Cishe izingxenye ezintathu kwezine (74%) zabahleli babike ukuthi bajabule kakhulu noma bajabule kakhulu ngokulindela futhi bahlela amaholide onyaka ozayo uma kuqhathaniswa nabane kwabangu-10 abangahleli.
Kodwa-ke, izithiyo ezihlobene nomsebenzi-njengomthwalo onzima wokusebenza kanye nokushoda kwabasebenzi-zingezinye zezizathu eziphezulu ezivimbela abantu baseMelika ukuthi basebenzise isikhathi sabo sokuphumula.
Okuqukethwe kwenkundla yezokuxhumana Kohlelo Lukazwelonke Losuku Lokuvakasha kuzomakwa kusetshenziswa #PlanForVacation.
Amapaki kazwelonke aseTanzania aqanjwe izindawo eziphezulu zabathandi bangaphandle
Ingxenye ye-Airbus Fleet ayiphephile ngokusho kweQatar Airways
Indawo entsha kaMarriott enezinhlobo ezimbili ivulwa ngo...
I-Lynx Air yethula izindiza ezintsha eziphuma e-St. John's
Izifo Zezinso: Ingozi Yezempilo Ethule Yomhlaba Wonke
I-SAUDIA: Okuhlangenwe nakho okusha Okugxilile ku-Arabian Travel...
I-Preeclampsia ingathinta noma yikuphi ukukhulelwa
Imibuzo Nezimpendulo Zemihlahlandlela Ye-CDC Entsha Ye-COVID
Ukuphumelela Kwezinketho Zezidakamizwa Zesikhumba Esivuvukalayo...
I-SAUDIA Iqala Ukuzijabulisa Okusha Kokundiza...
Bangu-27,000 abavakashi baseRussia abavaleleke phesheya ngemuva kwendiza entsha...